qalisa ukudala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kufuneka siziyilele njengabaqulunqi, sixolele ukungafuneki kwakhona. Le yinyani kwaye kolu luyilo kwinqanaba lomsebenzi, ukuba nekhadi leshishini elilungileyo elisebenza ngandlela thile njengesiqinisekiso okanye ubuncinci njengesixhobo esincedisayo sokufumana umsebenzi kunye nokuthatha inxaxheba kwiiprojekthi ezinomdla. Ukongeza kwipotifoliyo yethu, eyintsika esisiseko kubuntu bethu njengabasebenzi bezithombe, I-resume yethu ingathetha ngakumbi ngathi esinokucinga ngayo. Ngoyilo olucocekileyo nolungokoqobo sinokudlulisa amandla okucwangcisa, ukucinga kunye nokutsha. Ke ngoko, kuhlala kubalulekile ukuba sibe nenye indlela elungileyo kuba iya kuba yeyokuqala (okanye eyokuqala) unxibelelwano nekontraka esinayo. Kuya kusoloko kucetyiswa ukuba sizame ukuyila eyethu ikharityhulam kwaye sibe nezalathiso zentsusa zayo.
Kungenxa yoko le nto namhlanje ndingathanda ukwabelana nani ngokhetho olulungileyo olungaphezulu kwama-XNUMX okuqala. Into elungileyo malunga noku kukuba ayikhululekanga kwaphela, kodwa iyahlelwa kwaye ngazo sinokusebenza kwi-tonic ehambelana nesitayile sethu ngokungathi sisakhiwo okanye olunye uyilo. Okucacileyo kukuba apha ungongeza zonke izithako ozifunayo kwaye uthathe isigqibo sokuba ungakhalipha kangakanani. Ewe kunjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo umamkeli, ngokufanelekileyo ukuba uza kucela umsebenzi kwi-SME okanye nakwinkampani ephakathi, Ukuba ne-resume ecace gca kunokungabi namveliso kwaye 'yoyikisa' abaphathi beHR. Ndikucebisa ukuba usebenzise ezinye izisombululo ezilula kwaye zikufutshane kumgangatho ofanayo kwezi meko.
Ungafikelela kolu khetho uku eli khonkco lilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ipakethe yasimahla yokudala yokudala